ျမန္မာသတင္းစံု – Page 90 – Welcome MMREPUBLIC
သူမကိုယ်တိုင်မေ့နေတဲ့ anniversary နေ့လေးအတွက် ရွှေထူးရဲ့ Surprise လုပ်တာခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ ရွှေမှုံရတီ
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေ႐ႊထူးကေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြ အ႐ြယ္စုံအားေပး ျခင္းခံရတဲ့ အဆိုေတာ္တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ႊထူးကေတာ့ သီခ်င္းေတြဟာ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ပါးစပ္ဖ်ားမွာေရပန္းစားေလ့ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကိုအားေပးတဲ့ပရိသတ္ေတြထဲမွာ ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြအမ်ားအျပားျဖစ္သလို ေယာက်ာ္းေလးပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးျခင္းလည္းရရွိသူလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ေ႐ႊထူးကေတာ့ အဆိုပိုင္းအျပင္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ဘက္ပါ ကူးေျပာင္းလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ဘက္မွာလည္း တက္သစ္စသ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္ေပမယ့္ တကယ့္ ဝါရင့္အႏုပညာရွင္ေတြဆီကရသေလာက္ ပညာေတြကို သင္ယူေလ့ရွိသူတစ္ဦးပါပဲေနာ္။ ေ႐ႊထူးရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးကေတာ့ ေ႐ႊထူးလို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ေ႐ႊမႈံကိုပါတြဲၿပီး ေတြးမိရေလာက္တဲ့ထိ ခ်စ္ၾကတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံပါပဲေနာ္။ဒီေန႕မွာလည္း ေရႊမႈံရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ My Day Read more
အရောင်းဆိုးပေးတဲ့လူတွေကြောင့် သက်တံလေးလို လှနေတတ်ပြီဆိုတဲ့ မအေးသောင်း
နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးချောလေး အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ အရောင်းဆိုးပေးတဲ့လူတွေကြောင့် သက်တံလေးလို လှနေတတ်တဲ့အကြောင်းကို “ကိုယ်ကတော့အဖြူရောင်ပဲ သူတို့က အရောင်ဆိုးပေးကြတာ ခုဆို သက်တန့်လေးလို လှနေတတ်ပြီလေ” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာဖော်ပြထားပါတယ်။မအေးသောင်းလို့ ပရိသတ်တွေကချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ အပျိုကြီးမမ အေးဝတ်ရည်သောင်းဟာ ပုရိသတွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၁၂)နှစ်လောက်ကတည်းက မော်ဒယ်မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာတော့ သူဟာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်လာပြီး ပထမဆုံးပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ “မုန်းစွဲ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မှာတင် သူ့ရဲ့ ပီပြင်ပြောင်မြောက်လှတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် Read more
ပိတ်ကားပေါ်မှာတင်မကပဲ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်က အလွဲတွေမှာပါ ပါးစပ်မပိတ်နိုင်အောင် ရယ်နေရတဲ့ ရွာဇော်ကြီးဇာတ်ကား(ဗီဒီယို)
ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပုံဖော်နိုင်တဲ့ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ နေတိုးကတော့ ဒီတစ်ခေါက်မှာ ရွာဇော်ကြီးဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဘဝအမောတွေကိုပြေအောင် ဖန်တီးပေးလိုက် ပါပြီ။ အူဝဲနဲ့ နေတိုးတို့နှစ်ယောက်သားရဲ့ အတွဲညီညီသရုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ကြည့်ရှု သူ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ရိုးရိုးအေးအေးနေတတ်တဲ့ အူဝဲနဲ့ ရွာရဲ့အော့ကျောလန် နေတိုးတို့နှစ်ယောက်သားရဲ့ ဆုံတွေ့မှု ဖူးစာလေးနဲ့ ရယ်မောစရာအလွဲလေးတွေ ကို ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် နှစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပြောစရာမလိုအောင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်မှာပါ။ ပိတ်ကားပေါ်မှာတင်မကပဲ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်မှာပဲ လွဲကြတဲ့အလွဲ ဗီဒီယိုလေးကို နေတိုးက သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက် Read more
ဂီတနယ်ပယ်ထဲကလေးစားအားကျရတဲ့ မောင်နှမတွေကိုယ်စား Best In Music ဆုကိုလက်ခံယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နီနီခင်ဇော်
မယ်လိုဒီဝေါလ်သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် မိမိရဲ့ဂီတအရည်အချင်းတွေကိုထုတ်ပြနိုင်ခဲ့သူ နီနီခင်ဇော်ကတော့ ပြိုင်ပွဲပြီးကတည်းက လက်ရှိအချိန်ထိမှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်မသွားဘဲ တိုးတိုးပြီးအောင်မြင်လာသူတစ်ယောက်ပါ။တစ်ကိုယ်တော်အခွေတွေလည်း ထွက်ရှိထားပြီး နိုင်ငံတကာပွဲတွေအထိခြေဆန့်ကာ အောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဒါ့အပြင် The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာလည်း ဒိုင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပါသေးတယ်။ ပွဲတိုင်းမှာထင်ပေါ်တဲ့နီနီကတော့ မနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉)ခုနှစ်အတွက် Myanmar Pride Awards ဆုပေးပွဲကြီးမှာ Best In Music ကဏ္ဍအတွက်ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီ Pride Award ကတော့ ကဏ္ဍအသီးသီးမှာထူးချွန်ကြတဲ့သူတွေကို ဆုချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ စည်သူဘိုကလေးတင့်အောင်၊နေတိုး၊နီနီခင်ဇော်၊ ဟန်တီ၊ဝင်းမင်းသန်း၊ဝဏ္ဏခွါနီး တို့ကရရှိခဲ့ပါတယ်။နီနီကတော့ ဒီဆုရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ “ဒီနေ့မှာတက်ရောက်ကြတဲ့ သူတွေအကုန်လုံးက Read more
အနုပညာသမိုင်းပြတိုက်မှာ ဘေးချင်းယှဉ်ပြီးချိတ်ထားတဲ့ ရွှေကစ်နဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်နေတဲ့ ဖွေးစိန်လေး
ဖွေးဖွေး နဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ဟာ ပရိသတ်အခိုင်အမာကိုယ်စီနဲ့ ရပ်တည်နေပြီးအနုပညာလောကထဲကို ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဝင်ရောက်လာပြီးငယ်ရွယ်လှပမှု သရုပ်ဆောင်ပီပြင်မှု ကိုယ်ပိုင်ဟန်အမူအရာ တို့ကြောင့် ပရိသတ်ရင်ထဲ ရောက်လာသူတွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖွေးဖွေးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်က အကယ်ဒမီဆုတွေလည်း ကိုယ်စီရရှိထားကြပြီး အနုပညာလောကမှာလည်း ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ဖွေးစိန်လေးက ရုပ်ရှင်သမိုင်းပြတိုက်မှာ သူမရဲ့ပုံလေးနဲ့အတူ ချစ်ညီမလေးရွှေကစ်နဲ့ ဘေးချင်းယှဉ်ပြီး ဓာတ်ပုံအချိတ်ခံရတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီး ပျော်ရွှင်ပီတိဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးစိန်လေးတော့အဲဒီဓါတ်ပုံလေးကို သဘောကျလွန်းလို့ ”Screenshot of the year 2020″ လို့တောင် ဆိုထားပါတယ်။ ရုပ်ရှင်သမိုင်းပြတိုက်မှာ ဖွေးစိန်တို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေက Read more
အိပ်မက်အရတူးဖော်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များ
အိပ္မက္ဆိုတာ လူတိုင္းမက္ဖူးၾကပါတယ္…အိပ္မက္ေတြက အတိတ္ကို ျပန္ၿပီး မက္တာရွိသလို အနာဂတ္ကို ႀကိဳၿပီးမက္တာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္.. ဒါေၾကာင့္ အိပ္မက္နိမိတ္အေဟာဆိုတဲ့ စာအုပ္ေတြမွာလည္း မိမိမက္တဲ့ အိပ္မက္ရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ေတြကို ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္… ခုလည္းပဲ အိပ္မက္အရ ေရွးေဟာင္းလက္ရာေျမာက္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ေတြကို တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္… အဲတာကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ မင္းေခါင္႐ြာမွာ ျဖစ္တာပါ…. အဆိုပါ႐ြာမွာ အိပ္မက္အရ တူးေဖာ္ၾကည့္ရာကေနေရွးေဟာင္းလက္ရာေျမာက္ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့တာပါ… ဒီလို ထူးျခားတဲ့ အတိတ္နိမိတ္အရ ေပၚထြန္းလာတဲ့ ဆင္းတုေတာ္ေတြကို ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း ဖူးေျမာ္နိုင္ေအာင္ ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ရပါတယ္ေနာ္…. Writer Read more
ဒီနေ့မှာ အသက်(၂၉)နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ယုသန္တာတင်
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေးယုသန္တာတင်ကတော့ ဒီနေ့မတ်လ (၆)ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယုသန္တာတင်ကတော့ဒီနေ့(၂၀၂၀)ခုနှစ် မတ်လ (၆)ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့လေးကတော့ အသက်(၂၉)နှစ်တိတိပြည့်မြောက်သွားတဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယုသန္တာတင်ကတော့ အခုနောက်ပိုင်းမှာအနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ ပွဲအခမ်းအနားတစ်ချို့ကိုသာ တက်ရောက်နေတာဖြစ်ပေမဲ့ယုသန္တာတင်ကို အားပေးချစ်ခင်တဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ယနေ့တိုင်ရှိနေစဲပါ ။ယုသန္တာတင်ကတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတော်တော်များများကိုအလည်အပတ်ခရီးတွေသွားရောက်ပြီး အလှအပရှုခင်းတွေကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေဖော်ပြပေးလေ့ရှိပါသေးတယ်။ မင်းသမီးချောလေး ယုသန္တာတင်ကတော့ငယ်ရွယ်နုပျိုပြီး လှပပြေပြစ်မှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် အသက်(၂၉)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားတယ်လို့တောင် မထင်ရလောက်အောင်ပါပဲနော်။ ပရိသတ်ကြီးရေပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေးယုသန္တာတင်ရဲ့ ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးအတွက်ကို မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးတွေ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦး။ CRD-Chilli – CeleGabarSource – Yu Thandar Tin Zawgyi Read more
အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဇာတ်ရုပ်နေရာမှ ဇာတ်ရှိန်တက်လာအောင်ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ပိုးအိအိခန့်
ပိုးအိအိခန့်ကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောတစ်လက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ဘောလုံးကစားသမား အောင်သူနဲ့အတူ လက်ထပ်ထိမ်းမြှားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ဝေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူ့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့ ဂန္တဝင်အငြိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ မြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပြီး ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာတော့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလုံးကို ဇာတ်ရှိန်တတ်အောင် အန္တရာယ်အရမ်းကြီးတဲ့ ဇာတ်ရုပ်နေရာကနေ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာတော့ ကျော်ထက်အောင်၊ အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသု၊ အကယ်ဒမီမင်းဦး၊ အကယ်ဒမီမြတ်ကေသီအောင်၊ အကယ်ဒမီမယ်လိုဒီ၊ မင်းပိုင် တို့ကလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအချစ်တော် မင်းသမီးချောလေး ပိုးအိအိခန့်ကတော့ မကြာမီရုံတင်ပြသတော့မယ့် ဂန္ထဝင်အငြိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ကို ဇာတ်ရှိန်တတ်လာအောင် အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပုံဖော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “ဂန္ထဝင်အငြိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ Read more
အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်နေတဲ့ အဖေကို သားဖြစ်သူက စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကို ခေါ်သွားလိုက်သောအခါ
အိုမင္းမစြမ္း ျဖစ္ေနတဲ့ အေဖကို သားျဖစ္သူက စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုကို ေခၚသြားလိုက္ေသာအခါ အခ်ိန္၃ မိနစ္ေလာက္ ေပးၿပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ အိုမင္းမစြမ္း ျဖစ္ေနတဲ့ အေဖကို သားျဖစ္သူက စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုကို ေခၚသြားတယ္။ အေဖျဖစ္သူဟာ အိုမင္းမစြမ္း ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ စားေသာက္တဲ့အခါအစားအစာေတြဟာေဘးကိုဖိတ္စင္ကုန္တယ္။ အေဖရဲ႕ေဘာင္းဘီနဲ႔အက်ႌေတြေပၚမွာလဲေပက်ံလို႔ေနခဲ့ပါတယ္။ တျခားဝိုင္းက လူေတြဟာအေဖျဖစ္သူကို႐ြံရွာတဲ့အျမင္နဲ႔ၾကည့္လို႔ေနေပမယ့္ သားျဖစ္သူကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးပါပဲ။ အေဖစားလို႔ေသာက္လို႔အၿပီးမွာေတာ့ သူ႔အေဖခုလိုျဖစ္ေနတာကိုလုံးဝမရွက္မိတဲ့ သားဟာထိုင္ခုံကထလို႔အေဖ့ကို တြဲကာသန႔္စင္ခန္းေခၚသြားပါတယ္။ သန႔္စင္ခန္းထဲမွာေပက်ံေနတာေတြကို ေသခ်ာသုတ္တယ္။ အက်ႌကိုသပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ျပန္ တည့္ေပးတယ္။ ဆံပင္ကိုညီေနေအာင္ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ လို႔ ၿဖီးေပးတယ္။ မ်က္မွန္ကိုသုတ္ၿပီးတည့္တည့္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္တပ္ေပးတယ္။ သူတို႔ ၂ Read more
အူဝဲကိုလေးစားအားကျတဲ့စိတ်နဲ့ အနုပညာမှာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ ခင်သဇင်
ခင်သဇင်ကိုတော့ စိုင်းစိုင်းရဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်မှာ အမိုက်စားကောင်မလေးအဖြစ်မြင်တွေ့ရပြီးကတည်းက ပရိသတ်တွေကမှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင် အနုပညာလောကမှာ အဆိုတော်၊သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုများစွာကို ရရှိနေပါပြီ။ ခင်သဇင်ကတော့ အနုပညာကဝေလို့တင်စားခံရတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို လေးစားအားကျတဲ့သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် ချစ်ရတဲ့အနုပညာရှင်နဲ့အတူ “နတ်” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးပြီးစီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ခင်သဇင်ကတော့ အူဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ခင်သဇင်ကတော့အူဝဲကို (၁၅)နှစ်ကျော်ချစ်လာခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။အရမ်းချစ်လို့ အိုက်တင်တွေကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီး အူဝဲလိုမျိုးအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်း “အချစ်လွန်ပြီး မအူဝဲ ဟန်တွေ အိုက်တင်တွေ မလုပ်မိစေဖို့ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထပ်ထပ် ဆင်ခြင် နေရပါတယ်။ အိုက်တင် သူခိုး တစ်ယောက် မ Read more